दोस्ती होस त यस्तो ! - Purbeli News
दोस्ती होस त यस्तो !
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र २४, २०७४ समय: १३:५४:१२
बेलबारी । शनिबार बिहान १० बज्नै लाग्दा सबैको ध्यान राजमार्गतिरबाट कार्यक्रम भएको स्थानतिर आँउदै गरेका एक ब्यत्तितिर सबैको आँखा सोझियो । सबैजना चनाखो बनेर उतैतिर फर्किए, आयोजकले हतार हतार कार्यक्रमको फर्मयाट बदल्यो, टाढैबाट ति ब्यत्तिलाई कार्यक्रममा अतिथिका रुपमा बोलायो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनेर बसेका बेलबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी अलिकति मुस्कुराए ।
उनको छेउमै बस्ने कुर्सी ब्यबस्था गरियो । बस्नासाथ पत्रकार र उपस्थित सबैका क्यामेरा त्यतै सोझिए । कुर्सीमा बस्नासाथ उनले ब्यंग्य गरिहाले,छेउमा बस्दा पनि गाहै्र हुन्छ, फेरी सबैले एमाले भएछ भनेर चर्चा चल्ला । यति भन्नासाथ हाँसोको फोहरा छुटयो कार्यक्रम स्थलमा । उनी अर्थात राजकुमार लिम्बु,जो नगर प्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर सुवेदीसँग झिनो मतले पराजित भएका थिए । लिम्बुले फेरी ब्यंग्य गरे थोरै मतले मात्र जितेको हो , धेरैले होईन, उनीहरुको यो ब्यंग्यात्मक शैलिको गफ यो पहिलो पटकको भने होईन । धेरै कम मानिसलाई मात्र थाहा छ । लिम्बु र सुवेदी एकदमै निकट साथी समेत हुन ।
थुप्रैपटक उनीहरुको भान्सा समेत शेयर भएको छ । लिम्बुले चुनावमा टिकट पाएपछि पहिलोपटक सुवेदीको घरमा पुगेर उनकी बृद्धा आमा सँग आर्शिवाद समेत लिएका थिए । उनीहरु साना साना कुरामा एकअर्काको सल्लाह समेत लिने गर्दछन । धेरै ठाँउमा प्रमुख र उपप्रमुखको कुरा नमिल्दा महानगर,उपमहानगर र नगरकै काम प्रभावित भएको र बोलचाल नै नभएको खबरहरु सार्बजनिक भईरहेका छन । अझ एउटै पदमा उम्मेदवार बनेर हारजित भएका अलग बिचारधाराका मानिसहरुका लागी त एकअर्काको बोलचाल त के भेट भईहाले पनि मुण्टो बटार्छन । यहि भिडमा यी दुई जनाको दोस्ती चाँही गज्जवको देखिन्छ ।
धेरैले उनीहरुको मित्रता बनावटी भनेपनि सामान्य कुरामा समेत उनीहरु एकअर्काको सल्लाह लिने गर्दछन । शनिबार जेसिजले आयोजना गरेका रत्तदान कार्यक्रमले जुटाएको संयोगले चुनाव पछि त उनीहरुको सम्बन्ध बिर्गियो भन्नेहरुका लागी गतिलो झापड दिएको छ ।
झापामा माइक्रोबसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु